IL-2126: izithombe, incazelo, intengo
Lokhu encane izimoto ezithwala ekilasini ne bakhulise wheel drive. Imoto waba anti-Inkinga iphinde ivumele uhlelo isitshalo usebenze kwezimo ezinzima zomnotho. Futhi umshini IL-2126 ubhekwa kakhulu izixazululo ephansi yokuphela b emakethe / a "yensimbi amahhashi".
Esikhathini yoma, lesi sitshalo "IzhAvto" ochwepheshe baye bathuthukisa entsha phambi-wheel drive imodeli "Moskvich". Onjiniyela bakwazi ukuthuthukisa umshayeli IL-13 ngaphakathi kohlaka kwale phrojekthi. Kodwa ngenxa yokuthi emakethe phambili drive imoto ibibanjwe, "AvtoVAZ", umsebenzi ekudalweni kwakudingeka ayeke. Ayengekho elikhethiwe ukunakekela iphrojekthi uhulumeni kanye zezinkonzo, ngoba sasingekho uxhaso.
Khona-ke uMnyango Design zalesi sihlahla waqala ukusebenza phezu imodeli entsha. Kwakuhlelwe ngoba base aggregate ekhona. Ngoba ngaleso sikhathi akakwazanga ukuphatha ukuthuthukisa phambili injini esiyingqayizivele, nabaqambi lobuchwepheshe isinqumo ukuhlomisa imoto ezingemuva wheel drive nge yesimanje ukumiswa izinhlelo. Kwakukhona Godu bathuthukisa umzimba omusha, okuyinto wakucabangela ekwazi ukumelana namandla omoya.
Engemuva-wheel drive - sempumelelo
Ngu design, imoto kwakuphakeme emakethe ekhona phambi-wheel drive imodeli. Onjiniyela bakwazi kakhulu ukunciphisa isisindo izingxenye ngabanye futhi izingxenye. Ngokwesibonelo, ukusetshenziswa aluminium esikhundleni steel ngokuningiliziwe ezifana kunjalo transaxle, le bezinhlamvu igiya we oluvala amasondo misa, kwaba nokulinganisa wt IL-2126 kanye phambi isondo VAZs nge usayizi ofanayo.
Leli cebo kunezinzuzo abanye phezu izixazululo ezivamile - kuphumelela ngokwengeziwe ukusatshalaliswa isisindo izindlela, kanye nokufinyelela okulula kubo for ukukhanda noma umsebenzi wokulungisa.
Umphumela waba entsha ngemuva drive hatchback enemininingwane futhi izindlela kusukela esikhathini esidlule, kuhlanganise izimoto ukushintshwa. Ngesikhathi imboni sahlela uthole imodeli esiyingqayizivele, ngaphandle kokushintsha isakhiwo ukukhiqizwa yezingxenye esemqoka.
Ubunzima ngendlela yokudala imodeli
Ngakho, ngo-1979 izwe wabona prototypes kuqala. Uhlobo prototype IL-2126 ibukeka yesimanje kakhulu futhi entsha. Le phrojekthi, elalisetshenziswa ukubala ikhompyutha ukumodeliswa wokuqala emlandweni eSoviet imoto umkhakha. Umzimba futhi ziphenywe umgudu womoya.
Kufanele ukuthi batch lokuqala kuhlulekile - ngenxa ukuhlolwa, kwatholakala eziningi kwamaphutha ezahlukene. Ukupha msebenzi cishe kahlanu. Kodwa yezinqumo ubunjiniyela babengavunyelwe ukusebenzisa imodeli ochungechungeni.
Vala version yokugcina yalungisa leminye eFrance, Renault automaker. ochwepheshe French baye benza izinguquko emzimbeni, futhi ngcono design ububanzi, amabhampa futhi izakhi gumbi.
Ngemva kwale phrojekthi sivunyiwe. Wathola Inkomba "05" futhi wafakwa ukukhiqizwa. Lokhu kwenzeka ngo-1984. Model IL-2126 udlulile lonke uvivinyo edingekayo, futhi uhulumeni ukhiphe imvume uqalise chungechunge.
Hhayi konke kamnandi kangaka ...
On the isinqumo phezu kokukhiqiza umsebenzi uqobo kwathatha iminyaka eyisikhombisa. Blame phathelana kancane eside ukuthuthukiswa futhi ukwakhiwa elihambayo othomathikhi. Ngo-1992, phakathi nenhlekelele, lapho kungenzeka ukuba uqale esikhiqiza izimoto, itheku futhi uphazamiseka. Lesi sitshalo wayengakwazi ukusungula oxhumana kudingekile nabaphakeli izingxenye kanye izingxenye. amakhophi eziyizinkulungwane ezimbalwa kuphela wakwazi ukuletha. Ayehlukile mediocre izinga Yakha. Futhi abathengi, ngemva imodeli waphuma nje awuboni, kodwa ukusebenza imoto IZH-2126 kwaba ezingeni eliphezulu.
Ngenxa zonke izithiyo ngesikhathi lapho ukukhiqizwa wayesalokhu egijima, imodeli kwaba kakhulu ngobuchwepheshe nangokuziphatha ephelelwe yisikhathi ngokumelene isizinda izimoto zabe sezithunyelwa zisuka phesheya.
Phakathi abakhiqizi ezifuywayo mncintiswano babe Ukrainian "Tavria" kanye vase zakudala, okuyinto uma sicabangela IL akuyona inhlangano enhle kakhulu ilahleke.
Imoto wadayiswa kuze kube sekupheleni 2007. Wabe esethula amazinga amasha Euro-2, kanye ifektri Izhevsk ayikwazanga ukudala izinjini ezingase uyidlule le isitifiketi.
Uma isitshalo idale uthenge ngomumo-umjovo uhlelo, ngabe kwaholela yokuthi imoto IZH-2126 intengo, sokuthi kwenyuswe amaholo kakhulu, futhi yokuthengisa - wawa. Ukuphathwa uye wanquma ukususa imoto kusuka elihambayo. Manje ithengisa i-500-1000 USD.
YeThestamente Izhevsk isitshalo
Iqiniso lokuthi ke la mandla wadala Classic "Lada" nge izinjini zakudala ngaphezulu, kodwa basakaza fuel injection uhlelo. Lokhu kuye kwenza ukuba amayunithi ezinjalo ukuba eqinisekisiwe.
Ngo-1999, umshini wayebizwa ngokuthi "Orbit". Kodwa ke gama lashintshwa "Ode".
Izici yangaphandle futhi ingaphakathi
Kuyathakazelisa kakhulu bagxuma umlando yalezi zimoto, kodwa okwanele ngalokho. Sekuyisikhathi sokukhuluma mayelana idatha zangaphakathi nezangaphandle.
He is kancane sifana hodgepodge. Ungakwazi simazi kangcono imoto IZH-2126 - kukhona isithombe esihlokweni. Ngokwesibonelo, ideshibhodi Onjiniyela lathathwa 41 th Moskvich. "Zhiguli" imodeli wabelane isondo wesishiyagalombili izibani, bese emva 10th "Lada", usebenzisa amasondo ayo futhi kude nawo.
Ngaphezu kwalokho, onjiniyela baye bazama ukuhlanganisa iningi izingxenye kanye izingxenye nezinye imishini yasekhaya. Lokhu kwenziwa ukuze nikwazi kulula ukuthola izingxenye ezidingekile ezisele (IZ "Ode" 2126 iyathinteka), futhi akukho-thile aesthetics ingaphandle. Ngakho, izibani ezinkulu emincane ye Vaz 2108 imodeli ayikwazi ngokuhlanganiswa phambi Ige. Lokhu umzimba sidalwe ekuqaleni ngaphansi izibani round ukuma. Ngu ukubukeka kwabo kufana kakhulu emzimbeni imizuzu 41 "Moskvich", kodwa izingxenye ezifanayo engekho.
Ngaphakathi, konke ngempela injabulo. Ungabona ingaphakathi imoto IZH-2126. Izithombe okwethulwa kulesi sihloko kuzokusiza ukuba bajwayelane ingaphakathi.
Iminyango evaliwe akuyona okokuqala, kuba ezijwayele abanikazi abaningi Vaz. Umsebenzi sivala kukhona kakhulu sibi kakhulu kunalokho okuboniswa 41 m, iminyango ingaphakathi - mpofu ngempela ngokwezinto. The Color Izinketho and plastic zazisetshenziswa njengezibonakaliso izinto zokuhlobisa.
Amajaji ithuluzi - ngokuphelele efanayo "Muscovites". Nezitulo abanye bathanda zibelula. Lapha futhi balolonge kangcono futhi ukulungisa isikhathi eside. Abaningi bakhononda hhayi ophahleni okusezingeni eliphezulu. Futhi kungani ku nomakhi isondo kwesokunxele ilebuli "Lada"? Le ndlela Ungase ukuthethelelwa kulabo abathanda Tuning. IL-2126 wonke ngaphezulu ephelele salokhu. Kodwa nanku abakhiqizi ezinkulu ukwengamela enjalo kunzima ukuthethelela.
Ngaphambili iphaneli okoqobo. Kuyinto ebalulekile eyaba azikubheki, eyenziwe yekhwalithi ephansi black plastic, inhlangano futhi has a high.
Naphezu kwakho konke lokhu, ngeke sikwazi ngokuphepha bathi abaklami bocwepheshe bakwazile ukwakha i elilungile ubuhle, ubulula ukusebenza umshini. Lounge ngaphezu kwabo bonke abanye onobuhle kuleli kilasi. Soundproofing ivumela ungezwa ukuthi kwenzekani ngemuva. izingxenye ezisezingeni ukwenza kube lula abanikazi IL-2126 ukulungisa imoto.
Futhi yilokho esinakho ngaphansi hood? Ngo uchungechunge enkulu imoto IZH-2126 uphethiloli injini kuwufanele 1.6 litre kusukela Vaz-2106.
Futhi e uhlelo babe 1.7-litre kanye 1.8 UZAM 3317 UZAM 3313. Ngisho e encane uchungechunge nomshayeli onobuhle yasetshenziswa zokuguqulwa ngaphambili noma wonke-wheel drive. Ngakho, i-UZAM amabili ilitha esetshenziswa Injection-248, Huyndai G4GM, kanye lokubolekwa ka Vaz-21214, 2130, 2106 futhi 21084.
Serial carburetor izinjini babe okusemgqeni, four cylinder. Ngamunye wabo kwaba ifakwe ketshezi Ukupholisa uhlelo nokucindezelwa Lubrication. Engine UMPO-331, esasetshenziswa esikhangisweni se amamodeli ukukhiqizwa, kwadingeka 85 l. a. amandla.
Gearbox kwaba mathupha ngokuphelele, emihlanu-speed. Kwakuthinta ukusebenza izingcula ezintathu. Lase sikuhlomele nge synchromesh ngoba igiya phambili. The bamba kwaba ezomile olulodwa-disc uhlelo ne drive wokubacindezela. PPC futhi esetshenziswa Vaz imodeli 2107-th.
Uhlelo ukumiswa seyenziwe ngesimo ezimele, entwasahlobo, ne bar telescopic. Futhi, ukumiswa waba ibha isimame. Kodwa-ke, phambi, kodwa emuva abetikhatsalela isigwedlo-entwasahlobo uhlelo.
Ngokuqondene amabhuleki, khona-ke wema phambi disc amabhuleki nge caliper elintantayo. Engemuva sigubhu amabhuleki zazifakelwe umshini owodwa isilinda kanye nokwenzeka ukulungiswa othomathikhi.
Izici ezithakazelisayo kakhulu kule moto ezihlobene nalokhu okulandelayo: ukuthuthukiswa yasetshenziswa isamba Amazing isikhathi ukuhlanganisa ngenduduzo phambi-wheel drive ezingemuva-wheel drive sakhiwo. Ngakho, ukuqeda ngokwanele ntathu ukudluliswa emhubheni, bese powertrain kanye ne-transmission, kanye cardan nge igiya saya ilungelo. Umphumela waba ukunciphisa ubude gumbi injini, ngaleyo ndlela kwande isikhala gumbi (uhlobo "ifektri Tuning").
IL-2126 has a CPR of 412-th "Moskvich". Wayengumngane kancane yesimanje. Manje, lesi sici lithole izigaba ezinhlanu. Ibhokisi kwaba ifakwe isigwedlo ngqo usuke amagiya. Lokhu kuzokwenza kakhulu lula ukushayela.
Engemuva ukumiswa serial lathathwa onobuhle zakudala Vaz. Ukumiswa Front - isinqumo okoqobo.
Abaningi, uma hhayi yonke imininingwane ziye zahambisana ngangokunokwenzeka nabanye imishini yasekhaya. Lokhu kwaba lula kakhulu ukugcinwa imoto IZH-2126, ukulungisa, ukuhleleka okuhle.
Yiqiniso, kule moto - hhayi uphawu lokunethezeka. Kodwa yena wayengazange ngakho isebangeni. Lena real imoto abantu bomdabu, futhi kule indima nguye ophethe kahle-hle. Yiqiniso, manje kukhona ngaphezulu yesimanje kanye eliphezulu kumakhophi, kodwa uma ufuna ukuthenga imoto ezishibhile ukuthi nje uya, uma hhayi okungcono, kuyacaca ukuthi ungumuntu omuhle. Car lilungiswe nokuba izingxenye ezisele (IZ "Ode" e 2126 kanye) bamunye nge Vaz iVolga.
Ngakho esiphethweni yini ukusebenza lobuchwepheshe, ukubukeka futhi ingaphakathi imoto yasekhaya "Moskvich" -2126.
Thenga izipikha emotweni
Kafushane mayelana nezimoto Mercedes: A-class, E-class, C nesigaba S-class
Car esibukweni ukufuthelana ngezandla zabo
Iqoqo bmw gina - okubonakalayo okungabikho
"Toyota" - imodeli uchungechunge "Corolla" (izizukulwane 10)
Small futhi okubi "Porsche Cayman"
Pancake kagesi ngwenya Delimano Pancake ahlula: ukubuyekezwa kanye izici
Nomthandazo Matrona eMoscow
Fransua Bushe: zabalingiswa umdwebi odumile
Ukuzifihla ku izinwele ngoba ebusuku - indlela elula nephumelelayo ukuxazulula izinkinga
Izimfihlo Ukuthandwa ngokuhambisa ikhabethe - Yini Order Cabinets Coupe
Umthandazo Inamandla abagulayo
Iyokhushulwa igazi lymphocyte ezinganeni - it is esiyingozi?
Uwoyela Orange - anti-cellulite kanye nezinye izifo
Ukuba abe illusionist kanjani: ukuqeqeshwa
Precious Bruges lace